करप्ट हावी भए, इमानदारहरु अगाडि आउन जरुरी छ – रामचन्द्र पाैडेल | सिमान्तMarginal करप्ट हावी भए, इमानदारहरु अगाडि आउन जरुरी छ – रामचन्द्र पाैडेल – सिमान्तMarginal
करप्ट हावी भए, इमानदारहरु अगाडि आउन जरुरी छ – रामचन्द्र पाैडेल
Posted on 31 Aug 2016 13 Sep 2016 by Jesi | INCOMESCO
नेपाली कांग्रेस पनि अधैर्य शक्तिमा गजवले रुपान्तरण हुँदैछ । हिजो सत्तामा पुग्नका लागि भुकम्प पिडितलाई बनायो र संसदको काम कारवाहि नै रोक्यो र भन्यो कि तत्काल पिडितलाई पाँच लाख बाँड । सत्ता पायो, त्यो के भएको छ- पीडितले पाए पाएनन, सबै कुरा छाडेर मन्त्रि मन्त्रालय तिर गिद्धे दृष्टि खन्यायो ।
अहिले नेकाका बरिष्ट नेता रामचन्द्र पाैडेलले अत्यन्त मार्मिक, सान्दर्भिक र यथार्थ तथ्य बाहिर ल्याएका छन- त्यो हो नेपाली कांग्रेसले ग्रहण गरिरहेको चरित्र । उनले हालै एउटा सर्वजनिक कार्यक्रममा भने – ”कांग्रेसले आफ्नो मौलिक पहिचान र स्वरुप गुमाउँदै लगेकोमा चिन्तित हुने जमात सक्रिय हुन जरुरी छ । नकारात्मक अवस्था सुधार्न इमानदारहरु अगाडि आउन जरुरी छ ।” वरिष्ठ नेता पाैडेलले भनेको उखान हो– जहाँ पाप त्यहाँ फलिफाप ! यो कुरा बार्गीनिगका लागि मात्रै हो त !
कांग्रेसमा लोभीपापी हावी हुँदै गएको गुनासो सुनाउँदै उनले भने– ‘पार्टीमा जताततै लोभीपापीहरुको विगविगी छ । लोभीपापीहरुलाई नै फलिफाप हुने अवस्था छ । यस्तो भएपछि पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ?’ पौडेलले भने–‘राजनीतिमा ‘करप्ट’हरु हावी हुन थाले, राजनीतिमा सेवा र समर्पण भन्दा प्रोपोगाण्डा हावी हुन थाल्यो । राजनीतिमा जति करप्ट भयो, जति प्रोपोगण्डा मच्चायो उति सफल भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिँदैछ ।’
उनले यो पनि थपे–‘नैतिकताको राजनीति हरायो, इमानदारले राजनीति गर्ने अवस्था नै रहेन । इमान र राजनीति एकै ठाउँ बस्न नसक्ने अवस्था समग्र राजनीतिमा सिर्जना गर्न खोजिएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यो अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ ।’
उनले मुलुकको राजनीति चिन्तालाग्दो बन्दै गएको टिप्पणी गर्दै भने– ‘राजनीतिमा करप्टहरु हावी हुँदै गए भने गुट उपगुट जन्मन्छन्, कांग्रेसमा यही भइरहेको छ । कांग्रेसले आफ्नो मौलिक पहिचान र स्वरुप गुमाउँदै लगेकोमा चिन्तित हुने जमात सक्रिय हुन जरुरी छ ।’
उनले भने–‘अवस्था नकारात्मक छ भनेर चुप लागेर बसेर हुँदैन, नकारात्मक अवस्था सुधार्न इमानदारहरु अगाडि आउन जरुरी छ । नकारात्मक परिस्थितिको मुकाबिला गर्न जरुरी छ ।’
उक्त भनाइमा असहमति कसैको छैन । यतिसम्म कि शेर ब देउवालाई सुनायो भने पनि उनले पनि इन्कार गर्न सक्दैनन । तर कसले कसरि सुधार गर्ने भनेर यिनीहरु बिचमा कसरत हुन्दैन । जसलाई फाइदा हुन्छ त्यो चुपचाप बस्ने गर्दा बिकृति सतहमा आयो र स्वयम नेताहरुले खुलेयाम दिक्दारी ब्यक्त गारना थाले।
के नेकाका बरिष्ट नेता रामचन्द्र पाैडेलले सुधारको नेतृत्व गर्लान वा केहि अघि मन्त्रीहरुको कोटामा भाग बण्डा नमिलेकोले तुष पोखेका हुन ? बार्गेनिङ्ग गरेन भने पत्ता साफ हुने भयले पो यसो गरेका हुन कि ! जे होस जेजस्तो परिस्थितिमा भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस अब पार्टिको हैषियतमा नभई ”भुँई फुट्टा बर्गको” हित र हकदारिमा चलेको कुरा वहांले सार्वजनिक रुपमा स्विकार्नु भएको छ। आशा गरौँ वहांले ”नकारात्मक अवस्था सुधार्न इमानदारहरु अगाडि आउने” आन्दोलको नेतृत्व गर्नुहुने छ । समयको प्रतीक्षा गर्नु पर्ने भएको छ ।
Posted in नेपाल, नेपाली कङ्रेसTagged अधिकार, गणतन्त्र, नेपाल, नेपालको राजनीति, प्रजातन्त्र र बिकास, बी पी कोइराला, ब्यवस्थापन, षड्यन्त्र, संबिधानLeaveacomment
Previous Postनेपाली अर्थमन्त्रीले कसरि बुझ्लान ?!Next Postब्रेक्जिट : दिनभरको शिकार, कान्छा बाउको अनुहार